नेपालमा इसाई : पृथ्वीनारायणको धपाईदेखि होलि वाईनको खेपाईसम्म !
नेपालमा कसरी भित्रिए इसाई ?
पृथ्वीनारायण शाहले किन धपाए इसाई ?
पृथ्वीनारायणले काठमाडौं उपत्यकामाथि विजय हासिल गरे । यसबाट तिलमिलाएको कम्पनी सरकार पृथ्वीनारायणलाई काठमाडौंबाट धपाउने दोस्रो योजनामा अग्रसर भयो ।
प्रत्यक बर्ष डिसेम्बर २५ तारिखमा विश्वभरी क्रिसमस मनाइन्छ । येशु ख्रिष्टको जन्मदिनको अवसरमा आज विश्वभरका क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरुले क्रिसमस डे मनाउँदै आएका छन् । आज २५ डिसेम्बर अर्थात् क्रिश्चियन धर्मका संस्थापक येशु ख्रिष्टको जन्मोत्सव । क्रिसमसडेका रुपमा विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।
दुई हजार वर्षअघि जेरुसेलमको बेथलेहममा कन्या मारियमको कोखबाट येशुको जन्म भएको विश्वास गरिन्छ । सर्वसाधारण मानिसलाई अन्याय, अत्याचार र विभेदबाट मुक्ति दिलाउन येशु आफैं क्रसमा चढेको उनका अनुयायीको भनाइ छ । येशुलाई जिसस क्राइस्ट पनि भनिन्छ । उनले मानव समुदायका लागि पुर्याएको योगदानको सम्झनामा इस्वी संवत् चलाइएको विश्वास गरिन्छ ।
नेपालमा हजारौं चर्च तथा ३० लाखभन्दा बढी क्रिश्चियन धर्मावलम्बी रहेको अनुमान छ । ०६४ अघिसम्म क्रिसमसडे चर्चमा मात्र सीमित हुने गरेकोमा केही वर्षदेखि सार्वजनिक स्थलमै विविध सांगीतिक कार्यक्रम गरेर मनाउने गरिएको छ ।
क्रिसमसका उपलक्ष्यमा काठमाडौंको ठमेल, बौद्धमा कार्यक्रम हुने गरेको छ । त्यस्तै ललितपुर, भक्तपुर, पोखरालगायत स्थलमा पनि सांगीतिक कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ । क्रिसमस ट्रीलगायतका सजावटले बजार र ठूला व्यापारिकस्थलमा आकर्षण थपिने गर्छ ।
क्रिसमस-जुन दिन जिससको जन्म हुनेवाला थियो । त्यसबेला म्यारी र जोसेफ बेथलेहतिर जाँदै थिए । त्यसबेला बेथलेहम निकै भिड हुन्थ्यो । उनीहरुले बस्ने ठाउँ पाएनन् । त्यसैले त्यस रातका लागि घोडाको तबलामा बसे । त्यही जिससको जन्म भयो । यहि कथालाई आधार मानेर क्रिसमस मनाइन्छ ।
इशाई समूदायमा प्रचलित उत्सव हो । ईशाई अर्थात क्रिसमस डे । तर, अहिले अन्य समुदाय पनि यस पर्वमा रमाउन थालेका छन् । हिँउद महिनाको सुरुवाततिर क्रिसमसको रौनक चढ्छ । यतिबेला पश्चिमा मुलुकमा हिँउ पर्न थालिसकेको हुन्छ । २५ डिसेम्बरमा प्रभु जिसस क्राइस्टको जन्म भएको मानिन्छ । त्यही आधारमा क्रिसमस मनाउने गरिएको बुझाई छ । अर्थात जिससको जन्मदिन ।
यस्तो छ कथा :
क्रिसमसको कथा आजभन्दा करिब २ हजार बर्षअघिको हो । बाइबलमा उल्लेख भए अनुसार त्यसबेला रोम शासन थियो । रोम शासनबाट बचाउनका लागि जिसस क्राइस्ट धर्तीमा अवतरण गरेका थिए ।
जुन दिन जिससको जन्म हुनेवाला थियो । त्यसबेला म्यारी र जोसेफ बेथलेहतिर जाँदै थिए । त्यसबेला बेथलेहम निकै भिड हुन्थ्यो । उनीहरुले बस्ने ठाउँ पाएनन् । त्यसैले त्यस रातका लागि घोडाको तबलामा बसे । त्यही जिससको जन्म भयो । यहि कथालाई आधार मानेर क्रिसमस मनाइन्छ ।
क्रिसमसलाई पश्चिमा समाजले भव्यताका साथ मनाउने गर्छन् । यसबेला घर घरमा क्रिसमस ट्रि सजाउने, त्यसमा रंगीचंगी बिजुली बाल्ने, खेलौनाहरु सजाउने जस्ता विधीहरु गरिन्छ ।के पनि भनाई छ भने, शान्त क्लज (जसलाई क्रिसमसको पिता भनिन्छ) यसबेला हरेकको ढोकामा आउँछन् ।
त्यही कारण पनि घरलाई झिलिमिली बनाइन्छ । शान्त क्लजले उपहार लिएर ढोकामा छाडिदिने कथन छ । यस पर्वको खास विशेषता भनेको क्रिसमस टि्र, शान्त क्लज, उपहार नै हो । यतिबेला रातो पृष्टभूमीमा सेतो फेरो भएको क्रिसमस ह्याट र लुगा लगाउने गरिन्छ ।
क्रिसमससँग जोडिएको रोचक कथा पश्चिमा समाजमा प्रचलित छ, खासगरी बच्चाहरुका निम्ति । भनिन्छ, शान्त क्लजले आकासमा बसेर बच्चाहरुले गर्ने गतिविधि नियालीरहेको हुन्छ ।
बच्चाले के राम्रो गरेको छ, के नराम्रो गरेको छ, सबै लेखाजोखा गर्छ । अनि सुनको मृगले तानेको रथमा चढेर आकाशको बाटो हुँदै हरेकेका घरघरमा आउँछ । राम्रो काम गर्ने बच्चाका लागि खास उपहार लिएर छाडिदिन्छ ।
संभवत धर्मको माध्यामबाट बच्चाहरुलाई सत्मार्गमा लाग्नका लागि प्रेरित गरिएको हो । क्रिसमसले विश्व अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्छ । बजारको ग्राफ एकाएक आकासिन्छ । पसलमा नयाँ नयाँ सामग्री, खाद्यन्न, लताकपडा, सजावटको सामाग्री, उपहारको खरिद बिक्री हुने गर्छ । अमेरिकामा क्रिसमसको लागि किनमेलको मौसम नै मानिन्छ ।
यस दिनलाई ब्ल्याक फ्राइडे पनि भनिन्छ । यो दिन थ्यांक्स गिभिङसम्म आएर समापन हुन्छ । मनोरञ्जनदेखि ठूलठूला उद्योगले आफ्नो उत्पादनका लागि विशेष मौकाको रुपमा क्रिसमसलाई उपयोग गर्ने गरेका छन् ।
के हो बाइबल ?
बाइबल इसाईहरूको पवित्र किताब हो । धर्मशास्त्रलाई धेरै इसाईहरू यसमा भगवानका पवित्र शब्दहरू रहेको मान्दछन् ।
बाइबलका धेरै नामहरू छन्; कोही पवित्र लेख भन्दछन्, कोही राम्रो किताब मात्र पनि भन्दछन् । यो धेरै बर्ष पहिले हिब्रु, एरमेइक र ग्रीक भाषामा लेखिएको हो । पछि यो अन्य भाषामा पनि अनुवाद गरियो । अहिले यो २००० भन्दा पनि बढी भाषाहरूमा अनुबाद भइसकेको छ ।
पहिले इसाई धर्मशास्त्रलाई पवित्र पुस्तक (ग्रिक भाषामा τὰ βιβλία τὰ ἅγια ता बिब्लिया ता हागिया) भनिन्थ्यो । अनुबाद नगरीकन बिब्लिया भन्ने शब्द अङ्ग्रेजीमा पस्यो । उच्चारणको परिवर्तन भएर, बाइबल भयो । अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा पस्यो ।
वास्तवमा बाइबल धेरै किताबहरूको समिश्रणबाट बनेको छ । यसको पहिलो भागलाई पुरानो नियम भनिन्छ । यसमा चहीं जम्मा ३९ किताबहरूको समिश्रण गरिएको छ, जसले इजरायलीहरूलाई कसरी भगवानले "आफ्ना मान्छेहरू " भनेर भने - भन्ने बारेमा लेखिएको छ । यहुदीहरू पनि यसलाई धर्मशस्त्र मान्दछन् ।
यसको दोस्रो भागलाई नयाँ नियम भनिन्छ । यो २७ किताबहरूको संग्रह हो, जसमध्ये प्रायजसो पहिले पहिले ग्रीक भाषामा लेखिएका थिए । यो किताबको मुख्य भागमा यशुको जीवनको वारेमा लेखिएको छ । यसमा सुसमाचार नाम भएका चार भागहरू छन् । नयाँ नियममा पुराना इसाईहरूले लेखेका चिट्ठीहरू पनि छन्, प्रायजसो पावलद्वारा लेखीएका चिट्ठीहरू छन् ।
बाइबलमा धेरै थरीका किताबहरू छन् । कुनैमा यशुका इतिहास, कुनैमा यशु र यहुदीहरूमा कथाहरू छन् । कुनैमा विद्धानहरूका भनाइहरू छन् । कुनैमा भगवानले आफ्ना मान्छेहरूलाई गर्न भनेका कुराहरू छन् । कुनैमा भगवानको गुनगान भएका भजनहरू छन् । कुनै आकाशवाणीका किताबहरू छन्, जसमा भगवानले आफ्ना छानिएका मान्छेलाई दिएका सन्देशहरू छन् ।
यस्तो छ इतिहास :
इसाई बाइबल विद्वानहरूले बाइबलको विश्वस्तता देखाउनलाई बाइबलका पाण्डुलिपिहरूको “सप्रमाणताको जाँच” लाई प्रमुख आधारशिलाको रूपमा औंल्याउने गरेका छन् । सप्रमाणताको जाँच (Authenticity Test) अनुसार कुनै लेखोटको सकलीपन, मूल हस्तलिखित गुरुकापीबाट उतारिएका प्रतिलिपिहरूको संख्या, मूल गुरुकापी तथा प्रतिलिपिहरूका बीचको समयावधि र प्रतिलिपिहरूका बीचको असङ्गतिको परिमाणको आधारमा निर्धारण गरिन्छ । यस जाँचअनुसार दौंतरी लेखोटहरूको तुलनामा बाइबलको नयाँ नियम सबभन्दा सकली लेखोट ठहर्दछ । हालसम्म नयाँ नियमका २०,००० हस्तलिखित प्रतिलिपिहरू अस्तित्वमा रहेका छन् भने पाण्डुलिपि संख्यामा नयाँ नियमपछि दोस्रो स्थान ओगट्ने होमरको इलियदको मात्र ६४३ प्रतिलिपिहरू छन् ।
अझ, नयाँ नियम पाण्डुलिपिहरूमध्ये सबभन्दा पुराना प्रतिलिपिहरू मौलिक रचना गरिएको समयको अत्यन्तै नजिकका छन् । साथै पाण्डुलिपिहरूबीच मात्र २% भिन्नता रहेको पाइन्छ जुनचाहिँ अधिकांशरूपमा हिज्जे र बिराम चिन्ह (punctuation) जस्ता सामान्य कुरामा सीमित छन्! पाण्डुलिपिहरूबीचको कुनै पनि अन्तरले इसाई विश्वासको एउटै पनि आधारभूत बुँदालाई फेरफार गर्दैन । यसैकारण ब्रिटिश म्युजियम (सङ्ग्रहालय) का भूतपूर्व निर्देशक तथा नयाँ नियम लेखोटका विद्वान, सर फ्रेडरिक जी केन्यनले यसरी भनेका छन्:
तसर्थ, सप्रमाणताको जाँचले बाइबलको नयाँ नियमलाई प्राचीन उत्कृष्ट साहित्यमा सबभन्दा विश्वसनीय लेखोटको रूपमा रहेको प्रमाण दिन्छ! तर अन्य प्रतिष्ठित साहित्यको पाण्डुलिपिहरूलाई हेर्दा उल्लेखनीय अन्तर पाउँदछौं । उदाहरणको लागि, ट्यासीटसको एनल्स (Tacitus’s Annals) को सबभन्दा पुरानो प्रतिलिप त्यसको मौलिक रचनाभन्दा १,००० वर्ष पछिको छ अनि जम्मा प्रतिलिपिहरू संख्यामा आज २० ओटा मात्र छन् ।
त्यस्तै गरी सुटोनीयसको द ट्वेल्भ सिजर्स (Suetonius’s The Twelve Ceasars) को सबभन्दा पुरानो प्रतिलिपि त्यसको मौलिक रचनाभन्दा ८०० वर्ष पछिको छ अनि प्रतिलिपिहरू संख्यामा जम्मा ८ ओटा मात्र छन् । तुलनामा नयाँ नियमका सबभन्दा पुराना प्रतिलिपिहरू मौलिक रचनाको ५० वर्षभित्रै लेखिए अनि पाण्डुलिपिहरूको जम्मा संख्या आज झण्डै २४,००० पुगिसकेको छ ।
होलि वाईन काण्ड के हो ?
‘जिसस क्राइस्टले आफ्ना अधुरा काम गर्न मलाई खटाएको हो,’ भन्ने दाबी गर्ने मुनले आफ्ना अनुयायीहरुको जीवन सार्थी चुन्ने अधिकार आफूले राखेका थिए। उनको आर्शिवादविना विवाह सम्पन्न नहुने प्रचलन छ। विवाह पनि उनीहरुको अनुमतिविना हुँदैन। मुन ‘म्याचिङ’ विना विवाहसमेत हुन सक्दैन। उनले भने अनुसारको जोडीले बिहे गरेमात्र पापमुक्त रगतको नाता तयार हुन्छ भन्ने दावी उनको थियो।
आयोजकले देभरबाट ४ हजार जोडीलाई ‘होली वाइन’ खान निम्तो गरेको थियो। विश्वमा परिवार विखण्डन भइरहेका बेला आर्शिवाद दिएर नेपाली परिवारलाई विखण्डनबाट जोगाउनका लागि आर्शिवाद दिइएको आयोजक संस्था युपीएका नेपाल अध्यक्ष एक नाथ ढकालले दाबी गरे।
युनिफिकेसन चर्चले आफ्ना अनुयायीहरुलाई निर्देशन नै बनाएको छ। त्यस निर्देशनको आर्शिवाद तथा आदर्श परिवार खण्डमा वैवाहिक समारोहलाई राखिएको छ। युनिफिकेशन चर्चका अनुयायीहरुका लागि विवाहका तीन चरण उल्लेख छ। ‘इन्गेजमेन्ट’, ‘होली वाइन समारोह’ र विवाह समारोह।
आफ्ना पाप पखाल्नका लागि ‘होली वाइन’ समारोहमा सरिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता खडा गरिएको छ। यो समारोहमा सरिक नभए आफ्नो पाप पखाल्न सकिँदैन्। यदि यो पाप नपखालिए सच्चा सन्तान प्राप्त गर्न सकिँदैन। यो समारोहलाई ‘सैतान’ (राक्षस) बाट भगवानमा परिवर्तन हुने समारोहको रुपमा लिइएको छ। होली वाइन समारोहमा नयाँ जीवन पद्धती अपनाउने र सच्चा अभिभावक (ट्रु प्यारेन्ट) बन्ने पाटो तर्फ लाग्ने वाचा पनि हो।
जो व्यक्तिले होलीवाइन पिउन अस्वीकार गर्छ त्यो व्यक्ति राक्षसभन्दा पनि खतरनाक स्थानमा पुग्ने दाबी गरिएको छ। ‘होली वाइन’मा अभिभावकको मासु र रगत पनि मिसाइएको भनेर दाबी युनिफिकेशन चर्चको निर्देशनमा भनिएको छ। त्यस्तै ‘होली वाइन’ ‘वाइन अफ लव’, ‘वाइन अफ हेभन’ र ‘आमाको दूध’को रुपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
उनीहरुले म्याचिङ गरिदिएपछि विवाहित जोडीलाई व्लेसिङ पनि यिनीहरुले नै दिन्छन्। उनीहरुले म्याचिङ नगरी विवाह भए पनि यसलाई मान्यता दिइँदैन। (विभिन्न पत्रपत्रिकाबाट साभार) !